galmudugnews.com » Daawo Sawiro Galmudug oo Ka Qaybgashay Shirkii Qaramada Midoobay ee Kampalaha Home About
Home » WARARKA » Daawo Sawiro Galmudug oo Ka Qaybgashay Shirkii Qaramada Midoobay ee Kampalaha Daawo Sawiro Galmudug oo Ka Qaybgashay Shirkii Qaramada Midoobay ee Kampalaha galmudug on
Oct 17th, 2012 //
No Comment Views 16407Shir Looga Hadlayo Arimaha Dalka Somalia ayaa Waxaa Kaqaybgalay Wafdi Balaaran oo Uu Hogaaminayo Gudoomiyaha Barlamanka Galmudug Mudane Cowke Haaji C/raxman Ayna Qayb Kayihiin Wasiirka Arimaha Gudaha Iyo Amniga Abshir Diini Cawaale Wasiirka Gadiiidka C/laahi Yarow,Wasiirka Kaluumaysiga Iyo Badda Mudane Gacaliye
Kulanka ayaa Looga Hadlayaa Arimaha Nabad Galyada Dalka Iyo Burcad Badeeda Sidookale waxaa diirada Lagu saaraya Waxbarshada Iyo Caafimaadka
Shirkaan ayaa Socondoono Mudo shan Cisho iyadoo ay goob joog ka yihiin Wafuud kala gadisan oo kasocota Dowlada Somalia Puntland Iyo Qaramada Midoobay
Popular post by viewDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 21000 hitsContact US - 19630 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 15696 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 14465 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 13884 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 13819 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 13808 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 12817 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 11754 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 11681 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo - 11664 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11500 hitsTopnews:- Heshiiskii Kampala oo fashil qarka u saaran iyo Iscasilaadii Farmaajo !! - 11496 hitsDhageyso Sarkaal Mareexana oo Hawiye si xun u caayay - Bashiir Jeneral Dhiin - 11326 hitsWariye qiimeen ku sameeyay sababaha Al-Shabaab uga baxeen Muqdisho - 11165 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11029 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 11025 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 11003 hitsDilaagii Khaarijiyay Agaasimihii Waagacusub oo Muqdisho lagu dilay - Walaalkii oo seexan La? - 10548 hitsWarar yahanka kooxda Realmadrid Cristiano Ronaldo oo jebiyay rikoorka gool dhalinta Horyaalka Spain - 10325 hitsKhaliif weyne oo Qaar ka mida beelaha Sacad caayay- Yaab - 10070 hitsXaaskii Adan Xaashi Ceyrow oo joogta Pakistan. - 9982 hitsDaawo Wareysigii ugu xiisaha badnaa taariikhda oo Faysal Cali Waraabe lala yeeshay - 9844 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 9771 hitsDaawo xiisadii ka dhalatay heshiiskii Ankara oo cirka isku shareertay -Wasiirkii Khaarijiga TFG oo cambaareeyay - 9755 hits Home About